Falanqeyn. Madaxweyne Farmaajo waa suurtagal in laga diyaariyo Mooshan - Latest News Updates
Falanqeyn. Madaxweyne Farmaajo waa suurtagal in laga diyaariyo Mooshan
Wali lama garan wax uu madaxweynuhu ugu baaqday inuu xildhibaanada labada gole ka dhaadhiciyo Qorshihiisa dagaalka ee uu iclaamiyey ee al shabaab.
Markay kulankaa baaqday waxaa bilowday kooxo kala u jeedo ah oo ka mida xildhibaanada labada gole oo ka soo hor jeeda siyaasada uu madaxweyne farmaajo ku hogaaminayo Dawlada Faderaalka
Waxaa soo baxay war isasootaray in xubno ka tirsan labada Gole ee Baarlamaanada Dawlada Faderaalka ee Soomaaliya ay qorsheenayaan
diyaarinta mooshan ka dhan ah Madaxweynaha Soomaaliya maxamed cabdulahi Farmaajo
Arimahan siyaasadeed ee ku saabsan Mooshin. maaha wax ku cusub siyaasada soomaaliya.
Waqtiga hada la joogo ayaa waxay xildhibaanada labada Gole u qayb samaan sadex kooxood oo kala u jeedo kala haysta.
Waxay Falanqeyn taydu farta ku fiiqaysaa xildhibaanada labada Gole ee baarlamaanka dawlada faderaalka inta koox oo ay u qeyb samaan beelaha ka soo jeedaan.
2) Kooxd Daljir waxaa xildhibaanadii. Sidii xooga lahay u taageersanaa in madaxweyne farmaajo ku guulaysto xilka madaxweyne waxa ay waayeen balanqaadkii ahaa in iyagu helayaan xubinta Raysal wasaare. Iyo nay heli doonaan xil muhiima dawlada uu hogaamiyo farmaajo
Kooxda daljir waxay kulmisaa 30 ilaa 35 xildhibaan oo u badan beelaha hawiye.
3 ) Kooxda sadexaad waa maamul Gobaleed yada xildhibaanada ku xiran madaxdooda oo fuliya danaha madaxweynashaaya maamul gobaleed yada oo aaney waqtigan isku fiicneny madaxweyne farmaajo madaxweyna yaasha maamul gobaleed yada iyo xiriirka madaxweyne farmaajo ma fiicna dhinac kasta
kooxda xildhibaanada ee aaminsan madaxda maamul gobaleed yadu waa ilaa 80 xildhibaan. oo isugu jira maamulada koonfur galbeed jubaland iyo puntland.
Haddii mooshanka socda diyaarintiisa lagu guuleysto waa hubaal in loo heli doono taageerayaal badan oo leh wejiyo badan
Sidaan hore u sheegay kooxahan badan ee kala dane siyaasadeed oo kala duwan wata ayaa isku baheysan doona howl gelinta mooshankan.
Iyagoo kooxkasta mooshinka ka dhigaysa qas iyo cabsigalin siyaasadeed. Inay dantooda ka helaan Mooshinka wareejinayaan.
Iskastoo madaxweyne farmaajo haysto taageerada dawlada Turkiga iyo Qadar oo markasta diyaar u ah inay bixiyaan dhaqaalaha lagu joojin karo haduu yimaado mooshin. Khatar galin kara xilka madaxweyne farmaajo.
Waxaa kaloo jira in Mooshinkan, ay dhabarka ka riixayaa Saraakiisha sirdoonka ee dawlada Emirate-ka Carabta, iyadoo loo adeegsanayo siyaasiyiin Soomaali ah, kuwaa oo Magaalada Muqdisho ku abaabulaya tiro Xildhibaano ah. Ilo wareedyo ayaa sheegaya in shirar gaar gaar ahi ay siyaasiyiinta iyo Xildhibaanaduba uga bilowdeen Magaalada Muqdisho.
Xaalada siyasadeed ee in dawladaha khaliijka iyo Turkiga isku haystaan danaha siyaasadeed ee ay kaleeyihiin Gayiga soomaaliya. Maaha wax qarsoon
Xaalada siyaasadeed ee dawlada madaxweyne farmaajo waxaa culayska wayn ka haystaa sidii loo mideyn lahaa kooxaha kala aragtida ah ee xildhibaanada labada gole ku jira.
Waxaa suurta gal ah hadii aan xal siyaasadeed loo helin. Wadanku uu gali doono qalalaase siyaasadeed oo keenta in ay wada shaqeyn waayaan Goloyaasha sharcidajita iyo golaha xukumadu oo ay istaagto habka wada shaqeynta ku dhisan. ee dawlada Faderaalka.